FUNNY – DigitalTimes
Apple ရဲ့ original iPhone တွေတုန်းကကြော်ငြာကိုမှတ်မိကြဦးမလား?? တချို့ကတော့ အဲဒီကြော်ငြာကို ရိုက်ဖူးသမျှစမတ်ဖုန်းကြော်ငြာတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးတီဗီကြော်ငြာလို့လည်း သမုတ်ကြပါတယ်။ အကြောင်းရင်းက ဖုန်းမှာပါသမျှ feature တွေအကုန်လုံးကို တစ်ခုချင်းစီ ဖော်ပြရှင်းပြသွားတဲ့အတွက်ပါ။…
လူတွေနဲ့စက်ရုပ်တွေတွဲဖက်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံရိုက်ကူးထားတဲ့ Samsung ရဲ့ကြော်ငြာသစ်
Galaxy S9 စမတ်ဖုန်းတွေမိတ်ဆက်ဖို့တစ်ပတ်အလို ဒီနေ့မှာ Samsung ကနေ ကြော်ငြာဗီဒီယိုအသစ်လေးထုတ်လိုက်ပါတယ်။ နာမည်ကတော့ “Our Galaxy” လို့ပေးထားပြီး တစ်နေ့တစ်နေ့ Samsung မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းစက်ရုံမှာလူတွေနဲ့ စက်ရုပ်တွေ ဘယ်လိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အလုပ်လုပ်ပြီး…
တန်ဖိုးနည်းပြီး အရည်အသွေးအကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Yi Action Camera ထွက်ရှိ
Yi ရဲ့ နည်းပညာလောက အခြေချမှုဟာ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ မိတ်ကပ်ဗူးအရွယ်အစားသာရှိတဲ့ အရည်အသွေးပြည့်ဝကောင်းမွန်တဲ့ ကင်မရာ ထွက်ရှိလာပါတယ်။ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ Focus ပိုင်းကို ပိုမိုချဲ့ထားပါတယ်။အဆိုပါ ထုတ်လုပ်မှုမှာ အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်အဖြစ် ကမ်းလှမ်းခံရမှုတွေရှိပါတယ်။YI…
ဆယ်စုနှစ်ကြာပျောက်သွားတဲ့ ချက်ချင်းရိုက် ချက်ချင်းပုံထွက်တဲ့ Polaroid Camera ကို ပုံစံတူတဖန်ပြန်လုပ်၍ နည်းပညာမြှင့်ပြီး စတင်ရောင်းချ
ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာပျောက်သွားပြီးမှ ပြန်အသက်အသွင်းလိုက်တဲ့ Polaroid Photography လို့ ခေါ်တဲံ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ဓာတ်ပုံချက်ချင်းထုတ်ပေးတဲ့ ကင်မရာကို ပြန်လည်ရောင်းချပြီဖြစ်ပါတယ်။Device အသစ်တွေကို အသုံးပြုပြီး နည်းပညာအဟောင်းနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Original ပထမဆုံးကင်မရာက…
Audio & Video FEATURES VIdeos
၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ မဖြစ်မနေ ကြည့်သင့်တဲ့ SciFi အသုံးချ ရုပ်ရှင် ၁၂ ကား
၂၀၁၇ ခုနှစ်ကတော့ ရုပ်ရှင်ချစ်သူများအတွက် အကြိုက်တွေ့မယ့် နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟာသကားကောင်းတွေ များသလို အက်ရှင်ကနေ ဒရာမာအထိ အခြားရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဇာတ်ကားကောင်းများကိုလည်း ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဒီနှစ်မှာ မဖြစ်မနေ…
“..ဘီလ်ဂိတ် ရဲ့ လူမသိသေးတဲ့ အချက် ၉ ချက် ..”
…. <3 ၁။ ဘီလ်ဂိတ်သည် စက္ကန့်တိုင်းလျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၅ဝ ဝင်ငွေရှိပြီး တစ်ရက်တာ ကာ လ အတွက် ဒေါ်လာသန်း ၂ဝ ဝင်ငွေရှိ၍…
စတိဗ်ဂျော့ဘ် ရဲ့ မလျှို့ဝှက်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၄၀)
စတိဗ်ဂျော့ဘ် ဟာ Apple ကုမ္ပဏီ ကို တည်ထောင်ခဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး နည်းပညာလောက ရဲ့ တီထွင်ပညာရှင်တစ်ဦး အဖြစ်လည်း အားလုံး က အသိအမှတ်ပြုထားကြပါတယ်။ စတိဗ်ဂျော့ဘ် တီထွင်ခဲ့သမျှ…
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လိုချင်တပ်မက်မှုအများဆုံး ခံရတဲ့ Smartphone တွေကိုပြပါဆိုရင်တော့ Apple ရဲ့ iPhone တွေကို လက်ညှိုးထိုးပြရမှာ မလွဲဧကန်ပါပဲ။ iPhone မှာ ဘာ feature တွေပါမှန်း…
Apple FUNNY Gadgets Gadgets HUBS NEWS
Apple ရဲ့ AirPods နားကြပ်ပြုတ်ကျရင် အဆင်သင့်ဖမ်းထားပေးမယ့် 3D ပရင့်ထုတ် ခြင်းတောင်းနားကပ်
iPhone7မှာ ရိုးရိုးနားကြပ်ပေါက်ဖြုတ်ပစ်ပြီး၊ ကြိုးမဲ့နားကြပ်စနစ်ကို ဦးတည်ချင်နေတဲ့ Apple လုပ်ရပ်ဟာ နည်းပညာတစ်ခေတ်ဆန်းနိုင်တာမှန်ပေမယ့်၊ လောလောဆည်မှာတော့ လှောင်ပြောင်မှုတွေ ရနေဆဲဆိုတာ သတိထားမိကြမှာပါ။ 3.5mm နားကြပ်ပေါက်ဖြုတ်တာအပြင် iPhone…
FUNNY Knowledge Others
“ ထူးခြားဆန်းကြယ် နည်းပညာနယ် ..”
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း မှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ Red Panda (ပန်ဒါနီ) ကို အင်္ဂလိပ်လို Firefox လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အင်တာနက် ကြည့်တဲ့ Browser Firefox…
FUNNY Google HUBS Mobiles & Tablets NEWS Softwares & Application
Solitaire နဲ့ Tic-Tac-Toe ဂိမ်းတွေကို Google Search မှာတင် ကစားနိုင်ပြီ
ကွန်ပြူတာအသုံးပြုသူတိုင်း ဆော့ခဲ့ဖူးကြတဲ့ Solitaire နဲ့ Tic-Tac-Toe ဂိမ်းတွေကို ယခုအခါ Google search မှာတင် ကစားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကစားဖို့အတွက်လည်း ဘာမှခက်ခက်ခဲခဲမလိုပဲ၊ သင့်ဖုန်းထဲက Google app…